ပညာရေးကောလိပ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမလောင်းများ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်စေမည့် စီမံချက်တစ်ခု ဗြိတိသျှကေ?? - Yangon Media Group
ပညာရေးကောလိပ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမလောင်းများ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်စေမည့် စီမံချက်တစ်ခု ဗြိတိသျှကေ??
ပညာရေးကောလိပ်များတွင် တက်ရောက်နေသော ဆရာ၊ ဆရာမလောင်းများ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်စေရန် စီမံချက် တစ်ခုကို ဗြိတိသျှကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ယခုနှစ်အတွင်း ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေးကောလိပ်များရှိ ဆရာ၊ ဆရာမလောင်းများ အင်္ဂလိပ် စာတိုးတက်စေရန်အတွက် ဗြိတိသျှကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းပြီး EFFE- CT ပရောဂျက်ကို ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင်နှစ်က စတင်ဆောင် ရွက်ခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင် ယင်းပရောဂျက်၏ Phase-2 ကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနနှင့် ဗြိတိသျှ ကောင်စီတို့ဆွေး နွေးလျှက်ရှိပြီးလာမည့် အောက်တို ဘာလတွင် စတင်နိုင်ရန်ရည်မှန်း ထားကြောင်း၊ ယင်းသင်တန်းကြောင့် ပညာ ရေးကောလိပ်ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်များမြင့် မားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
”အဓိကကတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက် ဖို့အတွက် လုပ်တာပေါ့။ တချို့ဆရာတွေဆိုရင် လာသင်တဲ့သူတွေနဲ့ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း အများကြီးရသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။ လောလော ဆယ် Phase-2 ကိုဆက်လုပ်ဖို့အတွက် သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးနေတုန်း ပဲရှိသေးတယ်။ အောက်တိုဘာလောက်တော့ ဆက်ဖွင့်နိုင်မယ်လို့ တော့ထင်တယ်။ လာသင်တဲ့သူတွေက ဗြိတိသျှကောင်စီက စီစဉ် ပေးထားတဲ့သူတွေချည်းပဲ”ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်းက ဧပြီ ၇ ရက် တွင်ပြောကြားသည်။
ပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့သော EFFECT ပရောဂျက်သည် သင်တန်း ကာလနှစ်နှစ်ကြာမြင့်ပြီး EFFECTကာလလခြောက်လ စုစုပေါင်း နှစ်နှစ်ခွဲကြာမြင့်ခဲ့ကာ ဗြိတိသျှကောင်စီ၏စီစဉ်မှုဖြင့် လာရောက် သင်ကြားပေးသော ဆရာများမှာ ပညာရေးကောလိပ်များတွင် နေ ထိုင်ပြီးသင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ လာမည့်ပရောဂျက်တွင် ယင်းအတိုင်းပင် ဆက်လက်နေထိုင်ပြီး သင်ကြားမှုများပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းတွင် အင်္ဂလိပ်စာနှင့်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများ ကို ပို့ချကြောင်း သိရသည်။ ”လာသင်တာကတော့ ပြည်ပကဆရာတွေချည်းပဲ။ သူတို့က တစ်ကျောင်းမှာ တစ်ယောက်နေပြီးသင်ကြတာ။ လာမယ့်သင်တန်း မှာလည်း အဲဒီလိုပဲသင်လိမ့်မယ်”ဟု ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် ပညာရေးကောလိပ် ၂၅ ကျောင်းရှိနေသည်။
သင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူး ရက်များအတွင်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများ ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်မည်
ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ ပျော်ရွှင်မှသာလျှင် ပြည်သူအားလုံး ကျန်းမာဖို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်း
Kroger ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းပြီးနောက် Ocado ၏ အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်း ထောင်တက်
မင်းကွန်းရွှေကျွန်းပင်နတ်ပွဲမတိုင်မီ တစ်ပတ်အလိုမှစတင်၍ပွဲတော်ဈေးတန်းတွင် အရောင်းအဝယ်စည်?
သူငယ်တန်း (KG) သင်္ချာနှင့် ဗျည်းအက္ခရာများကို ပညာသင်နှစ်၏ နောက်ဆုံးသုံးလမှသာ သင်ကြားပေးရမည်